AMACWECWE EKHITSHI ELAMINATE (ISIKHOKELO SOYILO) - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi Amacwecwe ekhitshi eLaminate (Isikhokelo soYilo)
Amacwecwe ekhitshi eLaminate (Isikhokelo soYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu sokuyila iikhitshi zokukhangela isikhombisi kubandakanya ukuba yintoni, iintlobo ezahlukeneyo, iindleko kunye neempendulo zemibuzo ethandwayo. Ngaphandle komgangatho wakho, ii-countertops ekhitshini lakho mhlawumbi zibona ukusetyenziswa kakhulu kwaye zithatha ukusetyenziswa kakubi kwayo nayiphi na indawo endlwini yakho. Zizinto eziphambili zoyilo, ke ufuna ukuba zibe nomtsalane, kodwa zikwafuneka zomelele kwaye zisebenziseke lula.
Ilitye lendalo laliyeyona ndlela ekuphela kwayo ekusetyenzisweni kuyo. Xa i-laminate yaziswa kwii-1950s kunye nee-1960s, yakhawuleza yathandwa ngenxa yeemfuno zokugcina eziphantsi, indawo yokucoca ngokulula, kunye nokuqina.
Uninzi lwezinto ezenziwe ngabantu azihlali ixesha elide njengezinto eziyilelwe ukuba zithathe indawo yazo, kwaye kuyinyani nakwimithi yokuqaba yamatye yendalo. Nangona kunjalo, xa ukhathalelwe ngokufanelekileyo, i-laminate inokubonakala ilungile njengoko yayinjalo ngemini eyabekwa ngayo iminyaka emininzi.
Izambatho ze-silk zeentyatyambo zeentombi
Imiphezulu yeetafile yekhitshi elaminethiweyo nayo ibiza kakhulu ngexabiso eliphantsi kunelitye lendalo, ngoko ke utyalomali olupheleleyo olwenzileyo lincinci. Ungadinga ukubuyisela imiphezulu yeetafile elaminethiweyo rhoqo kunelitye lendalo, kodwa oku kukunika ithuba lokutshintsha ukujonga ikhitshi lakho!
Zithini iiComputer eziLaminethiweyo
Amaphepha eLaminate eLaminate eKhitshi
Granite Jonga imiphezulu yeetafile elaminethiweyo
Imiphezulu yeetafile eLaminate ejongeka njengeQuartz
Iindleko zokuLungisa iKhitshi zokuCoca
Ukupeyinta iiLitafile zekhitshi eLaminate
Ikhitshi lokuLaminate Countertop
I-Q & A yeComputer Countertops Q & A.
Ngaba ndingazibeka iindawo ezitshisayo ngokuthe ngqo kwiiLitekethi eziLaminethiweyo?
Ngaba ndinokukhetha ukutya ukutya kumanqatha amdaka?
Ngaba i-Laminate Countertops ngaphandle kwegesi?
Kuphi ukuthenga ii-countertops eziLamin
Ngaba iLaminate yinto elungileyo ekukhetheni izinto zokubala?
Nguwuphi umahluko phakathi kweLaminate kunye neFomica Countertops?
Ngaba iiComputer zeLaminate ziseseSitayeleni?
Ngaba unokubeka i-Laminate entsha ngaphezulu kwe-Old Laminate Countertops?
Ngaba ndifanele ndifumane i-Granite okanye i-Countertops yeLaminate?
Zeziphi iiLaminates eziGqwesileyo kwiComputer?
I-Laminate yenziwe ngamacwecwe ephepha. Iingqimba eziphezulu zinoyilo lokuhombisa, ngelixa iziseko ezisezantsi zenza undoqo. Emva koko ifakwe emanzini kwaye uphiliswe ngobushushu. Iphepha eliboshwe nge-resin lifakwe kwibhodi yokuxhasa ebizwa ngokuba yi-substrate.
Iifomthi zokuphamba zangaphambi kwefom zifika kwindawo yomsebenzi elungele ukuyifaka. I-backsplash yenziwa ngexesha lenkqubo yokuvelisa, ke konke okushiyekileyo kukwenza kukuphosa i-countertop kuyo kwaye uyikhusele.
I-laminate eleleyo eflethi iza ngamashiti amakhulu, athi emva koko abekwe, asikwe, afakelwe ukwenza imiphezulu yeetafile.
Ifom ye-laminate yangaphambi kwexesha ilunge ngakumbi, kodwa awunakulawula apho kudibana khona iizilebhu ezimbini. Kuba i-laminate ichaphazeleka kukonakaliswa kwamanzi kwimigca, iingcali zokuma kweekhitshi zihlala zizama ukubeka iiseams kude nomhlaba wokuntywila esinkini.
Ukuba usinki ekoneni, i-laminate ethe tyaba-ethe tyaba inokuba yeyona ikhethekileyo. Isifakeli sakho sinokusika umngxunya wokuntywila esityeni, siyigcine sikhuselekile kumonakalo wamanzi.
Ngoku ukuba uyazi umahluko phakathi kwefom yangaphambi kwexesha kunye neeflethi ezibekwe ziiplati, masixoxe ngamaphepha e-laminate.
Le mveliso iyingqayizivele iyintandokazi phakathi kwe-DIYers. Yenziwe ngendlela efanayo nemiphezulu yeetafile yokuthambisa, kodwa ayifakwanga kwibhodi yokuxhasa.
Endaweni yoko, iphepha kunye ne-resin layer iyaqengqeleka kwaye ithengiswe ngqo kubathengi, abanokuthi emva koko bayidibanise nomphezulu wokhetho lwabo. Olu lukhetho oluhle lokuhlaziya ukubonakala kokudinwa okanye ukukrwitshwa kwelaminethi.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-laminate yenziwe ngamacandelo ephepha agqunywe kwi-resin kwaye ibotshelelwe kwibhodi yamasuntswana okanye kwi-MDF.
Uyilo lwecomputer yakho luvela kumaleko aphezulu ephepha. Ngokubanzi, iphethini iphinda rhoqo kwii-intshi ze-18 okanye njalo. Olu phindo alubonakali kakhulu, kodwa ungalukhetha ukuba uchitha ixesha elaneleyo ufunda i-countertop yakho.
Olu phindaphindo lweepatheni kudala luyinto ethintelayo ekuveliseni imiphezulu yeetafile yokujonga i-granite ekhangeleka ilaminate. IFomica isombulule le ngxaki ngokugqitywa kwayo kokugqibela kokufota.
Endaweni yokuphindaphinda, iifoto zentsingiselo ephezulu yegranite ziprintwe kumaphepha afikelela kwiimitha ezintlanu ubude. La maphepha asetyenziswa njengomaleko ophezulu xa kwakhiwa ii-countertops. Isiphumo sineepatheni ezahlukeneyo, ezingaphindwayo kwi-laminate, enokusetyenziselwa ukufezekisa imbonakalo ye-faux granite.
Khetha imiphetho yesikwere kwiprofayile yeplasethi yokubukeka kweplanethi yakho yokuxhasa ukukhohlisa kwelitye lendalo.
Ngelixa i-laminate inokuthi ikwazi ukulinganisa ukujongeka kwesilayidi segranite, ayinakuphindaphinda ubume okanye ubushushu obupholileyo bamatye. Nangona kunjalo, ukuba ujonga uhlahlo-lwabiwo mali olulunge ngakumbi imiphezulu yeetafile lenyengane oko kukunika uyilo olufanayo oluhle, i-granite-ijongeka ilaminate ilingana netyala.
I-Granite ayilona kuphela ilitye lendalo elinokulinganisa. Ukuthandwa kunye nokufumaneka kwee-countertops ze-laminate ezibukeka njenge-quartz zikhuphuka.
Ayisiyiyo kuphela ipateni yelitye eziphindaphindwayo zezi countertops, ikwayimbonakalo yobunzulu. Njengombala wegranite-jonga i-laminate, uyilo loyilo lwe-faux quartz laminate eneneni yinkcazo ephezulu yokufota. Oku kugcina i-laminate ukuba ingajongi mbini.
Ukuchukumisa i-countertop kuya kubonisa ukukhohlisa, njengoko i-laminate ayive ngathi ilitye. Kwakhona, ukuba ujonge ukukhanya kwendalo Imiphezulu yeetafile zekartz , unokufumana kunzima ukuyenza kwakhona imiphezulu yeetafile elaminethiweyo.
Iindleko zokuLungisa iKhitshi zokuCoca iKhitshi
Iindleko zokuqala zokufaka imiphezulu yeetafile yokusombulula kukususa izinto ezindala. Yikholwe okanye ungakholelwa, oku akubandakanywanga kuqikelelo oluninzi lofakelo. Ungayisusa i-countertop endala, okanye uhlawule i- $ 200 ukuya kwi-400 yeedola ukuze ikwenzele.
Imiphezulu yeetafile eneLaminate ixabiso lentengo ngonyawo wesikwere. Amaxabiso avela kwi-27 ukuya kwi-34 yeedola, ngamaxabiso aphakathi ajikeleza nge- $ 29 ngeenyawo zenyawo. Ukuba ufakela imiphezulu yeetafile ngokwakho, akuyi kufuneka ukuba uhlawule abasebenzi.
Iindleko zabasebenzi ziyahluka ngokwendawo okuyo, kodwa cwangcisa ukuchitha i- $ 10 ukuya kwi- $ 30 ngeyure kufakelo lobungcali. Ukufakwa ngokubanzi kuthatha phakathi kweeyure ezisibhozo ukuya kwezilishumi ukugqiba.
Ikhitshi elincinci ngokubanzi lithathwa njengelinye elinendawo engaphantsi kweenyawo ezingama-60 zesikwere. Ukufakela i-countertop yexabiso eliphantsi elisezantsi kwikhitshi elincinci kunokwenzeka ukuba lixabise malunga ne- $ 1,400. Ukuba uhlawulela uncedo kunye nento ekususweni kwe-countertop endala, loo nombolo iya kuba kufuphi ne- $ 2,500.
Ikhitshi eliphakathi linama-60 ukuya kuma-80 eenyawo zeenyawo zokubala. Ngomgangatho ophakathi we-laminate ekhitshini eneenyawo ezingama-70 ezikwere zeetafile, indleko ezibonakalayo ziya kuba malunga ne- $ 2,000.
Ukufakwa kunye nokususwa kwe-countertop ekhoyo yongeza i- $ 1,000 eyongezelelweyo. Iindleko ezipheleleyo zokuhlaziya iincopho zekhawuntari ekhitshini eliphakathi ngobukhulu kunokwenzeka ukuba zikufutshane ne- $ 3,000.
Amakhitshi amakhulu ngalawo angama-80 ukuya kuma-120 eenyawo zeenyawo zokubala, okanye ngaphezulu. Ukufakwa kobungcali kweenyawo ezili-120 zomgangatho ophezulu wokulaminisha kungabiza iidola ezingama-4,380. Ngaphandle kwemisebenzi yofakelo, iindleko ziyehla ziye kuthi ga kwi-3,400 yeedola.
Ukuba ukhathele ngumzekelo kwi-countertop yakho ye-laminate kodwa isesimweni esihle, unokutshintsha ukujonga usebenzisa upende. Uya kudinga iintsuku ezimbini okanye ezintathu kule projekthi.
wenzeni ngengubo yomtshato
Ipeyinti incamathela kakhulu kumphezulu ococekileyo owomileyo. Sebenzisa amanzi ashushu anesepha ukucoca nakuphi na ukungcola kumphezulu wee-countertop. Landela isicoci esekwe kwi-ammonia ukuhlubula ioyile kunye negrisi ngaphezulu, kwaye uyivumele yome ngokupheleleyo.
Sanda wonke umphezulu wecomputer yakho ngeflethi okanye kwinqanaba eliphakathi lesandpaper, kwaye ugcwalise nakuphi na ukukrwela okanye ukubhuqa ngomthi wokugcwalisa. Vala uthuli kunye nenkunkuma, emva koko ufake isilungiso esifanelekileyo. I-primer inxiba i-laminate kwaye ilungiselela umphezulu ukwamkela ipeyinti.
Khetha ipeyinti esekwe kwioyile kwiziphumo ezilungileyo. Impendulo kwimibala esekwe kwioyile kukuba ithatha ixesha elingakanani ukuze yome. Vumela iiyure ezingama-24 ukuya kuma-48 ukuba ipeyinti inyange, ngokungqinelana nemiyalelo evela kumenzi. I-Stencil inokuqeshwa ukwenza ipateni yokuhombisa. Ungathenga nokupeyinta i-faux granite ukufezekisa ukubonakala kwelitye lendalo.
Nje ukuba ipeyinti yome ngokupheleleyo, ulungele inyathelo lokugqibela: ukusebenzisa izaleko ezibini zebhatyi ephezulu. Sebenzisa i-topcoat ye-polyurethane ukukhusela i-countertop yakho entsha, epeyintiweyo, e-laminate kumonakalo. Cwangcisa ukuphinda ufake i-topcoat rhoqo kwiinyanga ezintandathu okanye ukugcina i-countertop yakho ibonakala intle.
Olunye uhlobo oluluncedo lokupenda ngaphezulu kwe-laminate kukwenza imiphezulu yeetafile ekhishini epoxy . Ukufakwa kwe-epoxy kunokuba yindlela elungileyo yokwenza i-epoxy resin ngaphezulu kweelaminithi ezindala ukubanika uyilo oluphuculweyo.
Ii-countertops ezinamanzi zihlala zisetyenziselwa iziqithi zasekhitshini. Sebenzisa i-laminate ukwenza ifayile ye- Ingxangxasi yekhitshi kwisiqithi sekhitshi Njengomfanekiso ongentla ungabizi ngaphezu kokusebenzisa ezinye iintlobo zezinto zokubala.
Xa uthenga ii-countertops ze-laminate kwisiqithi sakho ungathenga ukusika kwiphepha lesayizi elenza ukuba umntu afumane iinkcukacha ezichanekileyo ezifunekayo. Kukho iindlela ezahlukeneyo zomda umntu anokukhetha kuzo kunye ne-oveni okanye isinki yokusika kweziqithi ezinezixhobo okanye isinki eyakhelweyo.
Hayi. Ilaminate iyabuchasa ubushushu, kodwa akufuneki ivezwe sisinyithi esitshisayo. Sebenzisa i-trivet ukukhusela i-countertop yakho xa uthatha iipaneli ngaphandle.
Hayi. Ilaminate ichaphazeleka kukrwela, ekunzima ukuyilungisa. Khusela utyalo-mali olwenzileyo ekhitshini lakho ngokusebenzisa ibhodi yokusika.
Iimveliso ezininzi ezenziwe ngabantu zikhupha iiVolatile Organic Compounds (VOCs) emoyeni kangangexesha elithile emva kwemveliso. Ngenxa yokuba ii-VOCs zidityaniswe neemeko zempilo, abathengi abaninzi bayaqondakala ukuba bafuna ukunciphisa ukubonwa kwabo.
Owona mthombo uphambili wee-VOCs kumacwecwe okuseta i-laminate yibhodi yamasuntswana, equlethe i-formaldehyde ngokubanzi. Ungayiphepha le nto ngokukhangela ibhodi yamasuntswana e-eco-friendly kunye nokusebenzisa i-laminate sheeting, endaweni yokuthenga ii-countertops zangaphambili.
IFormica iqhubekile nokuhlala kumda wokusika imveliso yeplathi yokuhombisa, kwaye ibonelela ngeendlela ezininzi kunaye nawuphi na omnye umthengisi.
Umgca wabo we-DecoMetal weemveliso ulingisa ukubonakala kweetafile zensimbi, ngelixa umgca we-180fx usebenzisa ukufotowa okuphezulu ukuzisa ukubonakala kwendalo kwegranite ekhitshini lakho. Ungangenisa uyilo lwakho kwaye u-odole isiteki sokubala.
Bangakwazi ukushumeka iteknoloji yokutshaja kwi-countertop, ukwenzela ukuba ibhetri yakho ihlaziywe rhoqo xa ubeka ifowuni yakho ekhitshini.
kunye nesinxibo somtshakazi esimnyama
UWilsonart ligama lesibini elaziwa kwishishini. Omnye umnikelo owahlukileyo ovela eWilsonart zizinto zabo zokubala ezinomgangatho ophantsi, ezenzelwe ukutshatisa iikhabhathi ezinesimo esincinci.
Uyilo-ngobulumko, iWilsonart ibonelela ngee-countertops ezibukeka njenge-quartz, i-granite, imarble, okanye ikhonkrithi. Banayo nenkqubo ekuvumela ukuba ulayishe eyakho uyilo.
Ezi zinto zimbini ziphambili zihlala zi-odolwa kwivenkile yophuculo lwasekhaya ngohlobo oluthile, nokuba lelibhokisi enkulu yeziko lokuphucula ikhaya elifana neDepho yasekhaya okanye iLowe, okanye ivenkile yentsimbi yobumelwane bakho.
Umphezulu we-Laminate wokumelana nokukrwela amabala kuya kunceda ukuphinda wonakalise usetyenziso oluqhelekileyo. Imiphezulu yeetafile elaminethiweyo ichaphazeleka ngumonakalo kwaye iya kubonisa ukufakela amazinyo xa ulahla into enzima kubo.
Iichips, ukuqhekeka, kunye nokutsha akunakukwazi ukulungiswa, ke yiphathe kakuhle i-laminate yakho ukuze ihlale ixesha elide kangangoko kunokwenzeka.
Imikrwelo emincinci kunye neetshiphusi ngamanye amaxesha zinokulungiswa kunye nokuncamatheliswa kokulaminita. Uya kudinga ukuxubusha ngononophelo umbala ukuze ufumane umdlalo olungileyo kunye necomputer yakho esele ikho.
Coca i-countertop ngesicoci esisekwe kwi-ammonia ukususa ioyile, igrisi, uthuli kunye nokungcola. Hlanganisa unobumba, kwaye usasaze ngemela ye-putty.
Lindela ukuba uncamathisele ukunyanga ngokuhambelana nemiyalelo yomenzi, emva koko usule nakuphi na ukugqitha.
I-countertop polish iya kunceda ukufihla ukukrwela okuncinci iinyanga ezimbalwa, kodwa kufuneka iphinde isetyenziswe.
Umonakalo wamanzi ngowona mngcipheko uphambili kwintembeko yeetafile zakho zokulaminisha. Khumbula, zenziwe ngephepha. Njengamaphepha, xa emanzi, ukuphazamiseka kunokwenzeka, kubangele ukuba i-laminate ihlukane ngamacandelo emaphethelweni.
Ngamanye amaxesha ukusebenzisa iglu kunye nokucofa i-laminate kunokusombulula le ngxaki. Beka itawuli yesitya okanye i-rag phakathi kocingo kunye nomphezulu we-laminate ukuze uqiniseke ukuba awuyikrweli okanye uyikrobe ngexesha lokulungisa.
Ukuba ukwahlukana okanye ukuxobuka kunzima kakhulu kule ndlela, ungashenxisa umonakalo kwaye usebenzise isamente yokunxibelelana ukufaka umda omtsha we-laminate.
Ilitye lendalo linokumelana ngakumbi nomonakalo kune-laminate, kodwa kunzima nokucoca kwaye lifuna ukugcinwa rhoqo kunye nokuthengiswa kwakhona.
Kuya kufuneka ukuba uthenge isicoci esikhethekileyo esifana nezinto zekhawuntari yakho. I-Laminate ayifuni ukugcinwa xa sele ifakwe, kwaye ayifuni isicoci esikhethekileyo.
Ii-countertops ezinamanzi zikhethwa ngokukhethekileyo xa zihlala zizinzileyo, zibiza ngexabiso eliphantsi, kwaye kulula ukuzigcina.
IFormica ligama lenkampani eyenze ukuba kuphakanyiswe imiphezulu yeetafile zelaminate. NjengoXerox noKleenex, igama lebrendi lalisetyenziswa ngabathengi njengegama elifanayo kwimveliso.
Ngaphambi kokuba kuphuculwe i-laminate, izinto zombane zazifakwa ngokufakwayo kusetyenziswa izimbiwa eziqhuba kakuhle kakhulu ezibizwa ngokuba yi ‘mica’.
Izazinzulu ezimbini zigqibe kwelokuba zikhangele ezinye iindlela ‘ze-mica’, zaza zathiya igama lenkampani yabo zinezo njongo engqondweni. Bafumene i-laminate. Ayisiyilaminethi nje kuphela eluncedo ekufakeni umbane, kodwa ibibhetyebhetye, yomelele, kwaye kulula ukuyicoca.
Ukuqaphela amathuba alo mbandela, uFomica waqala ukuvelisa iiphaneli zodonga kunye neetafile. Basekhona kwishishini nanamhlanje.
Ngokobuchwephesha, zizinto zokubala ezinamathambo kuphela eziveliswe yile nkampani ezinokubhekiswa kuzo njenge 'Formica'. Ngokwenyani, nayiphi na ingcali ye-countertop iya kuyazi ukuba uthetha ntoni, ke la magama mabini angasetyenziswa ngokungafaniyo.
I-laminate eyakhunjulwa nguBoomers ukusuka ebuntwaneni yayikhangeleka ingeyonyani, yayikrwempa ngokulula, kwaye yayisengozini yokufuma. Kodwa i-laminate iguqukile ukusukela ngoko.
Iilaminethi zanamhlanje kunzima ukwahlula kwilitye lendalo, ukumelana nokukrwela, kunye nokukhuselwa kokufuma. I-Laminate engakhangeleki ngathi ilaminethi ngokuqinisekileyo isesitayeleni.
Ewe! Unokubeka amaphepha e-laminate ngaphezulu kwe-laminate endala ukuyinika ubomi obutsha. Iphepha elaminethiweyo lenzelwe le njongo ngokukodwa. Ufuna umphezulu ogudileyo, nococekileyo.
Qala ngokusebenzisa ifiller yokugcwalisa naziphi na iigouges okanye imikrwelo ebalulekileyo. Ukuba imiphetho ye-laminate iyahlula, yincamathele kwaye uyibambe ukuze ubuyisele iprofayili yentsusa yecomputer ngaphambi kokufaka i-laminate sheeting ngaphezulu.
Linganisa kwaye usike i-sheeting laminate. Qiniseka ukuba uvumela igumbi elaneleyo ngaphambili nangaphezulu.
Coca imiphezulu yeetafile esele ikhona kunye nesepha namanzi, emva koko ukhulule nayiphi na ioyile kunye negrisi ebusweni usebenzisa isicoci seammonia. Vumela ukuba zome.
Sebenzisa i-sandpaper ukugcoba umphezulu we-laminate. Ibrashi ethambileyo okanye isicoci sokucoca isusa naluphina uthuli-luqhube ngasemva kwiphepha laminate, nalo. Faka isicelo se-samente yoqhakamshelwano ngebrashi yendalo.
Khetha isamente esingadibaniyo kunye nendawo yokugcina umoya xa usebenza. Umphunga wesamente yokunxibelelana akufuneki uphefumlelwe, njengoko zinokubangela ukuba nesiyezi, isicaphucaphu, kunye nobunzima bokukhanya - akuhambelani nokwenza iiprojekthi zokuphucula amakhaya.
Ukuba ufuna imiphezulu yeetafile yegranite, kuya kufuneka ufumane umthengisi onamaxabiso aphantsi kunye nodumileyo. Uyakwazi ukukhetha kuphela kwiintlobo zamatye aveliswe kwindalo.
Iigranites ezingaqhelekanga, ezinqabileyo nezinqabileyo ziza nepremiyamu yokunyusa imali enokuphazamisa uhlahlo-lwabiwo mali lwakho emanzini. Okanye, unokukhetha i-laminate endaweni yoko.
I-Granite inzima kakhulu kune-laminate, ke kungafuneka uqinise iikhabhathi zakho ukuze uyixhase, wandise ubungakanani beprojekthi yakho. Imiphezulu yeetafile zelaminate ezilula zinokufakwa ngaphezulu kwazo naziphi na iikhabhathi.
Khetha i-laminate ngenkangeleko yegranite ngaphandle kwendleko, ukugcinwa kunye nobunzima obongezelelekileyo.
I-laminate efanelekileyo kwi-countertops yakho yinto ehambelana nebhajethi yakho kunye nokuqonda koyilo. Nazi iindlela ezimbalwa zokuyila zokujonga iprojekthi yakho elandelayo:
UCarrara Bianco. Lo mnikelo uvela kwiFomica ukunikezela ngenkangeleko emhlophe Imiphezulu yeetafile zemabhile ngemithambo engwevu ngeqhezu leendleko kunye nokugcinwa. Unokukhetha nelizwi eliphantsi lemithambo engwevu ukuthelekisa ngokuchanekileyo yonke ikhitshi lakho.
Inkanyamba iBordeaux. Umdlali wesithathu ophambili kwihlabathi lee-countertops ze-laminate yi-Arborite, kwaye olu luyilo yenye yezona zidume kakhulu. Yenzelwe ukujongeka njengegranite, inesiseko esimhlophe-bhakabhaka esingabonakali kwaphela ngombala obomvu.
UWilsonart ujonge ukugxila kubathengi babo abarhweba, kodwa usenenani elibalulekileyo lokukhetha kwindawo yabo yokuhlala. I-Antique Bourbon Pine yenye yezona zinto zodwa ezizodwa, zikunika inkangeleko yeetheyibhile ezikhathazayo zomthi ezine-orenji, obomvu, kunye nemigca emnyama.
Nawuphi na umthengisi okanye uyilo olisebenzisayo, imiphezulu yeetafile yokuthambisa zizinto ezinesitayile, ezihlala ixesha elide, kwaye ezifikelelekayo nakweyiphi na ikhitshi.
Ukufumana umxholo ofanayo ngakumbi ndwendwela igalari yethu Iingcamango zomgangatho oqinileyo .
mdala kangakanani uDonald trumps umfazi wesibini
indawo yomlilo yezitena emhlophe mhlophe
Ukugcoba umtshakazi nomyeni
Iingcamango zoyilo lomgangatho